टेलीप्रोमिटर: तपाईको अनलाइन प्रोफेशनल टेलीप्रोम्प्टर | Martech Zone
शनिबार, डिसेम्बर 5, 2015 शनिबार, डिसेम्बर 5, 2015 Douglas Karr
धेरै जसो मँ बोल्दछु, म स्वाभाविक बोल्न चाहन्छु र मेरो प्रस्तुतिमा ठूलो भिजुअलहरू छन्। यस तरिकाले, म प्राकृतिक देखिन्छु र म स्क्रिनमा शब्दहरू भन्दा श्रोताहरूको भाषणको रिसेप्शनमा फोकस गर्न सक्दछु। यद्यपि त्यहाँ समयहरू पनि छन् - यूट्यूब भिडियोमा जस्तै - जहाँ मसँग सीमित समय छ र स्क्रिप्ट लेख्न आवश्यक छ।
कागजातमा शब्दहरू टाँस्नु र देख्न सकिने फन्ट साइज बम्प गर्नु भनेको टेलीप्रोम्प्टर हुने नक्कली तरिका हो। अवश्य पनि, स्क्रोलिंग गरेर तपाईंको ठाउँमा राख्नु भनेको ढु in्गामा दुखाइ हो। केही वर्ष पहिले, हामीले एक उपकरण साझा गर्‍यौं प्रोप्रोमिटर डेस्कटप, जसले तपाईंलाई रेकर्डि whileको बखत तपाइँको वेब क्यामेरामा सीधा हेर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
जबकि प्रोप्रोमिटरले आफ्नै टेलिप्रोमिटर अनुप्रयोग प्रदान गर्दछ, त्यहाँ एक विकल्प अब अनलाइन उपलब्ध छ। टेलिप्रोमिटरसँग सफ्ट्वेयर सेवा को रूपमा सेवा अनलाइन छ जहाँ तपाईं आफ्नो स्क्रिप्ट अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ (वा बहु व्यक्तिको लागि लिपि), अन्तराल तोक्नुहोस्, र छविहरूमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सित्तैमा यी सबै गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईंको स्क्रिप्ट सदस्यताको अंशको रूपमा उपलब्ध राख्न सक्नुहुन्छ।
TelePromptor कसरी एक पेशेवर को रूप मा बोल्ने को लागी ओभर द्वारा संचालित पेटेन्ट-पेन्डि technology टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ दश हजार भाषण। औसत ध्वन्यात्मक अवधि प्रविधिको प्रयोग गरेर, तपाईं पेशेवरहरू जस्तै सोच्न सक्नुहुन्छ! क्लाउडमा होस्ट गरिएको, TelePromptor एक हो पेशेवर टेलीप्रोम्प्टि application अनुप्रयोग सफा, इन्जिनियर गरिएको प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको साथ जो कोही क्यामेरामा स्क्रिप्ट पढ्न आवश्यक पर्दछ।
छविहरू, स्पिकरहरू सेट गर्न, र ब्रेकहरू समायोजित गर्न क्षमता प्रदान गर्दै, सम्पादन स्क्रिन आत्म-व्याख्यात्मक छ।
प्ले स्क्रिन भित्र, तपाईंसँग तपाईंको स्क्रिप्टमा पहुँच छ र समग्र टाइमलाइन। शीर्षमा तपाईको स्क्रिप्टको लागि प्रगति पट्टी हो जुन ब्रेकसँग स्पष्ट रूपमा बीसँग रेखांकित गरिन्छ। नम्बरहरू र सम्बन्धित रंगहरू विभिन्न स्पिकरहरूको समन्वयको लागि हो। भर्खर तपाईको स्क्रिप्ट अपलोड गर्नुहोस्, तपाईको ब्रेक समयहरू सासका लागि रोक्नुहोस् वा पज गर्नुहोस्, र तपाई जानुहुन्छ!
किनकि टेलिप्रोमिटर उत्तरदायी छ र ब्राउजर भित्र खेल्छ, यो कुनै पनि उपकरणमा डेस्कटप, ट्याब्लेट वा मोबाइलमा पूर्ण प्रस्तुतीकरण मोडमा प्ले गर्न सकिन्छ।
टेलीप्रोमिटर प्रयोग गर्नुहोस्
टैग: अनलाइन मार्केटिंग सम्मेलनअनलाइन टेलीप्रोम्प्टरभाषण टेलीप्रोम्प्टरभाषणहरूTeleprompterटेलिप्रोमिटर अनुप्रयोगtelepromptingटेलप्रोम्प्टि application अनुप्रयोग
प्रत्येक सामाजिक मिडिया मार्केटरको कार्य सप्ताहमा १२ कार्यहरू